Azonao atao izao ny mametraka lamina manokana ao Safari | Vaovao IPhone
Alex Vicente | 26/09/2021 13:00 | iOS 15, Fampianarana sy torolàlana, maro
Miaraka amin'ny iPhone 13 nahatratra ny mpampiasa voalohany ary niaraka tamin'ny iOS 15 miaraka amina herinandro, iray amin'ireo fanovana mahavariana indrindra hitranga rehefa mampiasa ny fitaovantsika amin'ity taona ity isika ny totalin'ny fanavaozana nofaritana tao amin'ny fampiharana azy ny Safari, ny browser-n'i Apple. Namboarina ny browser mba hahamora ny fivezivezena sy afaka mandamina ny vakizoro misokatra rehetra amin'ny fomba tsotra kokoa. Fa tsy izany ihany koa mamela antsika hanamboatra azy io bebe kokoa amin'ny alàlan'ny fampidirana ambadika mahazatra ao amin'ny iPhone. Atorinay anao ny fomba fanaovana azy.
Ny fametrahana background mahazatra ao amin'ny iPhone ao amin'ny app Safari dia tena tsotra ary azonao atao ny mampiasa ny sarinao manokana na mametraka ireo sary vaovao nampidirin'i Apple tamin'ny iOS 15.
Ahoana ny fametrahana lamina manokana ao Safari amin'ny iOS 15
Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia manokatra tabilao Safari poakaty vaovao. Tsy maintsy manao an'izany ianao tsindrio ny efamira roa izany dia ao amin'ny bara misy eo amin'ny farany ambany havanana sy avy eo tsindrio ny bokotra "+" izay hiseho amin'ny bara iray ihany amin'ny ankavia eo akaikin'ny tabilao rehetra izay nozarainao tamin'ny tabilao.
Manaraka, tsy maintsy midina hatrany ambany ao amin'ny kiheba izay nosokafana ho anao mandra-pahitanao ny bokotra Edit.
Amin'izany fomba izany no hidiranao ny safidim-panaingoana rehetra ananan'i Safari. Eo anelanelany, ho hitanao ny Toggle Sary afara, izay hampavitrika anao hahafahanao misafidy ny mombamomba anao izay tianao indrindra.
Tsindrio ny bokotra + Azonao atao ny mampiditra ny sary avy amin'ny galerianao.
Vantany vao nifidy ny vola nofidinao ianao, izany dia haseho eo afovoany amin'ireo pejy izay tsy manana iray, ohatra, rehefa manokatra vakizoro vaovao ao Safari ianao dia hahita ilay sary voafantina miaraka amin'ireo safidy mahazatra asehon'ilay mpitety tranonkala.
Izaho manokana dia mieritreritra fa tsara ny manana an'io fahaizana manokana io, saingy, Heveriko fa tsy hisy akony lehibe izany satria amin'ny ankamaroan'ny pejy tsidihinay dia tsy ho hitanay ny momba anay. Ary koa, iza no mbola tsy zatra feo fotsy tsy misy tabataba rehefa miditra amin'ny tranokala? Lazao anay izay hevitrao momba ity safidy fanamoriana ity!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » Azonao atao izao ny mametraka fiaviana mahazatra ao Safari